Laptọọpụ Ryzen 7 Processor: Kedu nke ị ga-ahọrọ? Hụ onyinye taa
Maka ndị chọrọ karịa, maka ndị ọrụ kachasị achọEnwere ụdị laptọọpụ Ryzen 7. Kọmputa nwere nnukwu microprocessor na-arụ ọrụ dị elu iji na-agba ụdị sọftụwia niile n'ụzọ agile na ngwa ngwa, site na ihe nchọgharị weebụ, akpaaka ụlọ ọrụ, na ngwa ndị ọzọ dị mfe, ruo na ibu ọrụ dị arọ. , nchịkọta, egwuregwu, ọkachamara imewe na edezi, wdg.
1 Laptọọpụ Ryzen 7 kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ Ryzen 7 kacha mma
3 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ Ryzen 7?
4 Ryzen 7 ma ọ bụ Intel?
5 Ryzen 7 ma ọ bụ Ryzen 5?
6 Ryzen 7 laptọọpụ egwuregwu, nhazi ọkacha mmasị
7 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Ryzen 7 dị ọnụ ala
8 Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Ryzen 7 dị ọnụ ala?
Laptọọpụ Ryzen 7 kacha mma
HPC Victus 16-e0073ns ...
Ụdị laptọọpụ Ryzen 7 kacha mma
Enwere ọtụtụ Ụdị na ụdị akwụkwọ ndetu Ryzen 7. Ọ bụghị ha niile na-enye otu nhazi ahụ, ma ọ bụ àgwà ndị ahụ, nke ikpeazụ dabere na ODM (Onye na-emepụta ihe mbụ), ya bụ, onye na-emepụta ihe mbụ. N'ime ụdị ndị ị ga-akụ bụ:
Onye nrụpụta China na-enye mmekọrịta ezigbo uru maka ego. Ị nwere ike nweta laptọọpụ Ryzen 7 nwere atụmatụ adịchaghị maka ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Amakwa m mara na isi nke ngalaba IBM ThinkPad nke ụlọ ọrụ a nwetara. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ kọmputa nwere Windows 10 Pro, kama ụdị ụlọ, ị nwere ike ịhụ nnukwu ohere ebe a.
Ị nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị dị, ka gbalịa imeju mkpa niile, na-eme mgbanwe maka mmasị, mkpa na akpa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere usoro ThinkPad na ThinkBook, nke emebere maka azụmahịa na gburugburu ọkachamara. Ma ọ bụ Yoga, maka ndị chọrọ ngagharị ka ukwuu, yana ọbụna IdeaPad maka ndị ọrụ ụlọ, yana Legion, maka ndị egwuregwu na ndị na-anụ ọkụ n'obi.
Ụlọ ọrụ ASUS bụ otu n'ime ha ndị isi na teknụzụ motherboard na nrụpụta. Ahụmahụ ahụ na-enyere ya aka ịmepụta otu n'ime laptọọpụ kacha mma ị nwere ike ịchọta, na-adọrọ mmasị n'ime na n'èzí. N'ime maka nnukwu ngwaike ya, na n'èzí nwere ụfọdụ ọmarịcha aghụghọ.
Ọ bụrụ n’ikpebie na laptọọpụ ASUS Ryzen 7, ị nwere ike ịnụ ụtọ teknụzụ kachasị ọhụrụ na njirimara mara mma na nke ọ bụla usoro. Site na ultrabooks, dị ka Zenbooks, na VivoBook maka multimedia, site na TUF maka ndị egwuregwu.
N'ikpeazụ, ọzọ nke ndị ukwu ndị na-ewu laptọọpụ bụ MSI. Ha na Gigabyte na ASUS bụ ndị isi na-arụ ọrụ nne na nna, yabụ na ha maara ihe gbasara azụmahịa a. Akara gbadoro ụkwụ na akụrụngwa dị elu yana ngwa egwuregwu, na ọnụ ahịa ibu, olu na oriri, n'agbanyeghị na ha nwekwara ụdị ụfọdụ maka ngagharị ka ukwuu.
Ọ dịtụ mgbagwoju anya site usoro dị iche iche nke na o nwere, dị ka GT Series maka ihe na-achọsi ike, yana oke arụmọrụ. Ma ọ bụ usoro dị ka Alfa, Bravo, GT, GP na GL maka ndị chọrọ ịrụ ọrụ dị elu, mana ọ bụghị maka GT. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ntakịrị mmegharị, ị nwere ike ịhọrọ ụdị GS na GF Series.
Otu n'ime ndị na-ere kọmputa akwụkwọ ndetu bụ HP Inc., nke nwere a nnukwu ndekọ n'ihe banyere ihe ọhụrụ, àgwà, arụmọrụ na atụmatụ mara mma. Ụfọdụ ndị otu na-eme mgbanwe maka onye ọ bụla, site na ndị na-achọ ihe maka egwuregwu, na ndị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ, site na ụdị ndị ọrụ ndị ọzọ.
All ekele ya ụdị nke dị iche iche usoro. Otu n'ime ndị kasị ewu ewu bụ Pavilion, iji na ọha ọha. Ị nwekwara anyaụfụ na Specter, nwere nnukwu ngagharị na nnwere onwe. Ma ọ bụ Elitebook na ProBook maka gburugburu azụmahịa. Na ọbụna Omen ama ama maka egwuregwu.
Nnukwu ika ọzọ, yana HP, bụ onye nrụpụta Taiwan ọzọ a. Ụlọ ọrụ nke jisiri ike wepụta niche n'etiti ndị kasị mma dabere na akụrụngwa siri ike, nwere oke mma, ezigbo atụmatụ, ọnụ ahịa dị ọnụ ala, na ọtụtụ ụdị iji mejuo ndị ọrụ niile.
Acer Gbasara 5 A515-44 -...
Laptọọpụ Acer ...
I nwere ike ịchọta usoro dị ka Spin na Swift, nke emebere maka njem ka ukwuu, yana ụdị ụfọdụ na-agbanwe agbanwe. Na mgbakwunye, ị nwere Aspire a ma ama, nke bụ oke ya na ebumnuche ya maka ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ kacha ukwuu. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ Nitro, maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị egwuregwu.
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ Ryzen 7?
Ryzen 7 bụ otu n'ime ndị na-arụ ọrụ nhazi kachasị elu site na AMD, nsonye maka ndị ọrụ na-achọ arụmọrụ dị elu. Ha nwere ihe ruru cores anụ ahụ 8 na ihe ruru 16 ezi uche dị na ya maka teknụzụ SMT, na-enwe ike iburu eriri iri na isii na-agba ọsọ n'otu oge. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere oge elekere dị elu, nke na-enye ha otu n'ime njirimara kachasị mma n'ọtụtụ ọrụ dị elu, gụnyere egwuregwu.
Site na laptọọpụ Ryzen 7 ị nwere ike ịnwe otu maka ihe niile. Na mgbanwe maka ịkwụ ụgwọ ntakịrị karịa, ị nwere ike echegbula banyere oke. Site na ụdị mgbawa a, ị nwere ike ịgagharị na ịntanetị, jikwaa ozi gị, sọftụwia ụlọ ọrụ na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ, imewe, mmemme, ime ihe, yana egwuregwu vidiyo AAA atọ kachasị mma nwere nhazi kachasị.
Ọzọkwa, inwe mmetụta dị otú ahụ, agaghị agabiga ụbọchị ngwa ngwa, yabụ ntinye ego mbụ nwere ike ịkwụ ụgwọ site n'ịghara ịkwalite ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ryzen 7 ma ọ bụ Intel?
La agha ebighi ebi AMD vs Intel Intel na-emeri ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, mana nke a agbanweela n'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, dịka ụlọ ọrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ enweela ike ibuso Chipzilla na microarchitecture dị ike n'ezie, na-eti ihe oriri, CPI, na ọnụ ahịa. Ihe yiri ihe na-agaghị ekwe omume afọ ole na ole gara aga nyere ịdị elu Intel.
Yabụ ugbu a, ịnwe laptọọpụ Ryzen 7 bụ nnukwu nhọrọ yana mgbakwunye mgbawa dabere na Intel. Na mgbakwunye na arụmọrụ, oriri na obere okpomọkụ, enwerekwa ụfọdụ uru ndị ọzọ ịhọrọ maka Ryzen 7:
Ahịa: Ọ na-adịkarị ala karịa nke Intel, nke ga-enye gị ohere ịzụta laptọọpụ dị ọnụ ala ma ọ bụ họrọ maka nhazi dị elu na AMD ma e jiri ya tụnyere ihe ị nwere ike ịzụta na mgbawa Intel nwere otu mmefu ego.
ECC: Nke a bụ ihe a na-ekwu ọtụtụ ugboro n'oge na-adịbeghị anya, ọ bụkwa ihe AMD ibe na-agụnye nkwado, n'ihi ya ị nwere ike ịrịgo ECC ebe nchekwa modul maka ntụkwasị obi ka ukwuu ma ọ bụrụ na ọrụ gị chọrọ ya. Ihe Intel anaghị enye n'ụdị ha ezubere maka ụlọ, naanị ị ga-ahụ na ụdị HPC dị ka Xeon.
TDP: Site n'inwe a elu n'ichepụta usoro, ekele ọnụ nyere site TSMC, AMD jisiri na-enye elu arụmọrụ na oké ike arụmọrụ na n'ezie ala okpomọkụ tụnyere ndị ọzọ Intel nsụgharị.
Ọrụ: ụfọdụ ụdị Ryzen 7 dị elu karịa ụdị Intel ndị ọzọ dakọtara ma e jiri ya tụnyere nha ọnụahịa.
PCIe 4.0: Ọ bụ teknụzụ na-akwado ibe Ryzen 7, ebe ị ga-eche ka ọgbọ ọhụrụ nke Intel nweta ya.
Ryzen 7 ma ọ bụ Ryzen 5?
AMD Ryzen 5 microprocessor nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ọtụtụ ndị ọrụ, yana oke arụmọrụ / ọnụahịa. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ike inwe afọ ojuju na njirimara nke SKU na mkpa arụmọrụ dịtụ elu. A na-eche Ryzen 7 maka ha, nke nwere cores abụọ ọzọ (ma ọ bụ nke anọ ezi uche dị na ya), nke sụgharịrị ịrụ ọrụ ka mma.
Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche họrọ Ryzen 7 ma ọ bụrụ:
A bụ gamer na ịchọrọ igwu egwu na nhazi kachasị elu yana na oge imelite CPU gị ga-egbu oge, inwe ike ịga n'ihu na-agba ọsọ aha AAA n'ọdịnihu ga-apụta.
Ọ bụrụ na iji igwe mebere n'out oge, inwe ike ikenye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke vCPUs na akụrụngwa nye onye ọ bụla n'ime ha na-enweghị akụrụngwa na-aga nwayọ.
N'ihe banyere ime ọtụtụ ihe n'otu oge, dị ka virtualizing na ndekọ gụgharia maka ọmụmụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Site n'inwe ọtụtụ cores, ị ga-enwe ike ịhazigharị ibu ahụ nke ọma.
para 3D imewe na video edezi, inwe ike inye ma tinye koodu ngwa ngwa maka ọnụ ọgụgụ cores dị ukwuu.
para mmemme nke dị mkpa iji chịkọta ọrụ ha ma dị arọ, na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke koodu isi mmalite.
Ọrụ ndị ọzọ gụnyere imekọ ihe ọnụ ibu arọ...
Ryzen 7 laptọọpụ egwuregwu, nhazi ọkacha mmasị
Otu n'ime ụdị laptọọpụ Ryzen 7 a na-achọkarị bụ ndị akpọrọ dị ka ụdị egwuregwu. Ma ọ bụ na ọtụtụ ndị na-azụta ụdị laptọọpụ a na-elekwasị anya na ntụrụndụ na egwuregwu vidiyo. Na mgbakwunye, ndị ọrụ ndị ọzọ chọrọ ha maka ọrụ ndị ọzọ na-ahọrọkwa ụdị akwụkwọ ndetu egwuregwu a maka njirimara teknụzụ ya na nhazi mara mma.
Dịka ọmụmaatụ, nhazi laptọọpụ Ryzen 7 kwesịrị ekwesị kwesịrị inwe opekempe 16GB nke RAM ma ọ bụ ihe ọzọ (karịsịa maka virtualization). Ọzọkwa, ị kwesịrị ịnwe ezigbo draịvụ ike SSD, ọbụlagodi na ị nwere HDD nke abụọ ma ọ dị mkpa. Na, maka ihuenyo, nhọrọ kachasị amasị bụ 15.6 ", ebe ọ nwere oke mara mma maka ọtụtụ ikpe. Na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnụ ụtọ multimedia, akpaaka ụlọ ọrụ, imewe, mmemme, egwuregwu, wdg.
N'ezie, buru n'uche na ngwaike a niile dị ike nwere a na-eri n'ihe gbasara njem. A ga-emetụta ikike nke ụdị akụrụngwa a, n'agbanyeghị na ị nwere ike ịhọrọ ụdị nwere ikike batrị dịtụ elu.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Ryzen 7 dị ọnụ ala
Laptọọpụ Ryzen 7 aghọwo ihe ewu ewu nke ukwuu. Afọ ole na ole gara aga ọ siri ike ịhụ kọmputa nwere AMD processorsebe ọ bụ na Intel fọrọ nke nta ka ọ bụrụ monopolized ngalaba ngagharị. N'aka nke ọzọ, ugbu a AMD jisiri ike meghee oghere ma na-eme mkpọtụ, n'ihi ya ị nwere ike ịchọta ụdị na ụlọ ahịa dị ka:
Amazon- Họrọ n'ọtụtụ ụdị na ụdị iji kwado mkpa na mmefu ego niile. Enweghị ngwụcha nke ihe ịhọrọ site na ya na nnukwu ngwaahịa, na mgbakwunye na nkwa niile nke ụlọ ahịa ịntanetị a. Ọ bụrụ na ị nwere Prime, ị nwere ike họrọ maka mbupu ngwa ngwa, gbakwunyere mbupu efu.
Ụlọikpe Bekee: na mpaghara Spanish a buru ibu ị nwere ike ịhụ ọnụ ụzọ Ryzen 7 sitere na ụdị dị iche iche, n'agbanyeghị na ha enweghị ọnụ ahịa kacha mma ma ọ bụ ọtụtụ ụdị. Na ihu ọma ya bụ ịbụ ụlọ ahịa a pụrụ ịtụkwasị obi na inwe ohere ịzụta ma online site na ebe nrụọrụ weebụ ya na ụlọ ahịa anụ ahụ n'onwe ya.
nrutu: yinye French nwere onyinye yiri nke gara aga, nwere ọtụtụ ụdị na ụdị na mkpịsị aka gị, yana ọnụ ahịa dị mma. Ị nwekwara ike ịhọrọ ịzụta ya na webụsaịtị ha ka iziga ya n'ụlọ gị ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ọ bụla gbasasịrị gburugburu maapụ.
Ihe PC: site n'isi ụlọ ọrụ ya dị na Murcia, onye na-ekesa ịntanetị a bụ otu n'ime ụlọ ahịa na-amasị ọtụtụ ndị. N'ime uru ya bụ mbupu ngwa ngwa, nkwado dị mma, na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụdị na ụdị dị na ịhọrọ nke kacha mma.
mediamarkt: Agbụ German ndị ọzọ nwekwara ọnụ ahịa dị ukwuu, yabụ ị nwere ike ịchekwa na ịzụrụ. N'ezie, ị nwere nhọrọ nke ịga otu n'ime ha ihu na ihu isi ihe ire ere, ma ọ bụ site na ha website ka ebuga ya n'ụlọ gị. Against ọ nwere oke dị iche iche dị.
Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Ryzen 7 dị ọnụ ala?
Oge kacha mma ịzụta laptọọpụ Ryzen 7 bụ oge ịchọrọ ya. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị nwere ike ichere, ị nwere ike mgbe niile họrọ onyinye na:
Black Friday: ụbọchị a, ị ga-ahụ ego nke nwere ike iru 30% n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọbụna izu tupu ụbọchị a, a na-amalite ịhụ ụfọdụ ihe ọkụ ọkụ n'ụlọ ahịa dị iche iche dị ka Amazon. Cheta na a na-eme ememe Black Friday na Fraịde ikpeazụ nke Nọvemba.
Ụbọchị Mbụ: Ọ bụghị ihe omume maka onye ọ bụla, mana naanị maka ndị nwere Prime. Ndị ahịa niile nwere ego ga-eru eru maka ụfọdụ onyinye n'oge mmemme a nke a na-atụ anya na ọ ga-abụ n'ime izu mbụ ma ọ bụ nke abụọ nke Julaị afọ a.
Cyber ​​Monday: Ọ bụrụ na ị funahụrụ na Black Friday, ị nwere ike ime ya na Monday na-esote. Ụbọchị nke ọtụtụ nyiwe ahịa na-enye onyinye dị ka Black Friday, ọkachasị nyiwe ntanetị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nhazi » Ryzen 7 Laptọọpụ